महिनावारी भएकी महिलाको प्याडबाट बन्छ रक्सी ! – Vision Khabar
महिनावारी भएकी महिलाको प्याडबाट बन्छ रक्सी !
। १३ चैत्र २०७४, मंगलवार १८:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । के तपाईं राजधानी काठमाडौंका होटेलमा बसेर रक्सी पिउनुहुन्छ ? या सगुनको रुपमा घरेलु रक्सीको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस् । किनकी तपाईंले पिउने र सगुन ठान्ने रक्सी महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याडबाट बनेको हुनसक्छ ।
‘मदिरा बनाउने ठाउँमा ठूलो मात्रामा महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरेको प्याड, छालाको पुरानो जुत्ता, तुनासहितको पुरानो चप्पल र पुरानो मोजा भेट्टियो,’ प्रहरी निरीक्षक पौडेलले भने, ‘बढी नशा लाग्ने रक्सी उत्पादन गर्न महिलाले प्रयोग गर्ने प्याडको प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।’
पसलकी सञ्चालिका विष्णुमाया गुरुङ आफूले पनि सेनेटरी प्याडबाट बनेको रक्सी बिक्री गरेको स्वीकार्छिन् । तर आफूले रक्सी बनाउने काम भने नगरेको उनको दाबी छ । ‘ग्राहकले कडा खालको रक्सी माग्नुहुन्छ । त्यस्तो रक्सी प्याड, मोजा र छालाको जुत्ताबाट बनाइन्छ,’ विष्णुमायाले निर्धक्क सुनाइन्, ‘रक्सी बनाउनेहरु छुट्टै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बोतलमा हालेर बिक्री गर्नुहुन्छ । हामीले १ ९२५० मिलिलिटर०को बोत्तलको १५ देखि २० रुपैयाँ तिर्छौं । ग्राहकलाई दिँदा ४० रुपैयाँ प्रतिबोत्तलसम्म लिइन्छ ।’
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. ज्योति अग्रवाल महिनावारी हुँदा महिलाको गुप्ताङ्गबाट बग्ने रगत शरीरको अन्य भागबाट बग्ने रगतजस्तै सामान्य भएको बताउँछिन् । तर महिनावारी हुँदाको रगतमा पाठेघरको भित्री छालाका टुक्रा, योनीमा भएको सेतो पदार्थ र हर्मोनहरु पनि रगतसँगै बाहिर आउने उनको भनाइ छ । ‘महिनावारी हुँदा महिलाको गुप्ताङ्गबाट रगतमा त्यस्तो कुनै पदार्थ (तत्व) हुँदैन, जसले मानिसलाई लठ्ठ बनाउने तथा नशा लाग्ने काम गरोस्,’ डा. अग्रवालले भनिन् ।